ပို့စ်တင်ချိန် - 4/26/2014 10:12:00 AM
1. ကျွန်တော့အမျိုးအမီး အသက်က 42 ထဲမှာပါ။ အိမ်ထောင်သက်3နှစ်ရှိပါပြီ။ သားသမီး မရှိသေးပါ။ ရန်ကုန်မြို့၊့့ မှာနေပါတယ်။ 2000 ခုနှစ်လောက်မှ စတင်ပြီး အာသီး မကြာခဏယောင်ခြင်း ဝေဒနာကို ခံစားလာခဲ့ရပါတယ်။ ခြေဖဝါး လက်ဖဝါး များပူပြီး ဖျားချင်သလို မသာမယာ ခံစားရပါတယ်။ ဆေးခန်းသို့ သွားရောက် ပြသချိန်နှင့် ဆေး သောက်နေသော ကာလတွင်တာ ခေတ္တ သက်သာပြီး ဆေးမသောက်သော အချိန်တွင် အပူအအေး အနည်းငယ် မှားယွင်းသည် နှင့် ဝေဒနာပြန်ခံစားရပါသည်။ ဇနီးသည်က အမြဲတမ်း ဆေးသောက်နေရတဲ့အတွက် အင်မတန်မှ စိတ်ဒုက္ခရောက်နေရပါတယ်။ တချို့ကလည်း အာသီး ဖြတ်ဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ တချို့ကလည်း အာသီး မဖြတ်ဖို့ တားမြစ်ပါတယ်။ အာသီးဖြတ်လို့ အသံ တုန်နေတဲ့ အမျိုးသမီးကိုလည်း တွေ့ဖူးပါတယ်။ အာသီးမဖြတ်လိုက်လို့ အသံပြာနေတဲ့ အမျိုးသမီးကိုလည်း တွေ့ဖူးပါတယ်ဆရာ။
2. ကျမသမီးက ငယ်ငယ်ကလေးဘဝထဲက အာသီးခဏခဏရောင်ပါတယ်။ ယခု သူ့အသက် ၂၇ နှစ်ပါရှင်။ အဲဒါနား နှခေါင်းလည်ချောင်းအထူးကုဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာ့့ နဲ့ အာသီးကိုခွဲထုတ်ရပါတယ်။ မခွဲက ကြာလျှင် ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ဆရာဝန်ကြီးက ပြောပါတယ်ရှင်။ သမီးကလည်း အာသီးရောင်တာကနေ့တိုင်းနီးပါးပါး ဆိုတော့ ကျမတို့လည်း ခွဲထုတ်ပြီးရင် ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့ ထင်ခဲ့တာ။ အခုခွဲပြီးတာ ၃ လရှိပါပြီ။ အာသီးခွဲတုံးက အနာကျက်ဆေး ၁ လုံး ၁ဝဝဝ/- တန် ၁ဝ ရက်ထိုးခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အာသီးခွဲတဲ့နေရာမှာ ပြည်တည်နေပါတယ်။ အရင်လိုဘဲ အာသီးရောင်တဲ့အတိုင်း ခံစားနေရပါတယ်။ ပိုက်ဆံလည်းကုန်၊ လူလည်းနာနဲ့၊ သမီးလည်း တော်တော် စိတ်ဆင်းရဲပြီး သမီးအသက် ၃ဝ ပြည့်အောင်နေရမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ ပြောနေပါတယ်ဆရာ။ ကျမတို့ ဘာဆက် လုပ်သင့်ပါသလဲဆရာ။
ပျို့၊ ဝမ်းပျက်၊ အန်၊ ခေါင်းကိုက်။ အိပ်မရတာ၊ ခေါင်းမူးတာ၊ ယားတာ၊ အမျိုးသမီးတွေ (ဗဂျိုင်းနား) ရောင်တာတွေဖြစ်နိုင်တယ်။ ဖနောင့်ကြောကို ထိခိုက်နိုင်လို့ ဆေးပေးနေတုံး ပြင်းပြင်းထံထံ လေ့ကျင့်ခန်း-အလုပ်လုပ်တာ ရှောင်ရမယ်။